အန္တရာယ်ကင်းရှင်းရေး & အာမခံ လုံခွုံမှု
၏အသုံးအများဆုံးအကြောင်းတရားများတစ်ခုမှာ လမ်းအပေါ်ခရီးသွားများအတွက်အနာရောဂါ ညစ်ညမ်းအစားအစာနှင့်ရေနှင့်ထိတွေ့ခံရခြင်းမှကိုအဓိကအားထား။ ထိုဘက်တီးရီးယားများနှင့်ကပ်ပါးကောင်သင့်ခန္ဓာကိုယ်ထဲဝငျဖို့အတှကျအလွယ်ကူဆုံးနည်းလမ်းတွေထဲကတစ်ခုဒေသခံကိုထိပုတ်ပါရေမှတဆင့်ဖြစ်ပါတယ်။ သငျသညျသငျ့သညျအရာတစ်ခုမှာကျိန်းသေတိုင်းခရီးစဉ်မတိုင်မီသုတေသနကိုထိပုတ်ပါရေကိုသောက်ရန်အန္တရာယ်ကင်းရှိမရှိဖြစ်ပါသည် - ကကျန်းမာတည်းခိုဘို့ဤမျှလောက်ရိုးရှင်းပြီးပေမယ့်ဒါအရေးကြီးသောအရာတစ်ခုခုပါပဲ။
ဥရောပနိုင်ငံများ၏အများစုသောက်သုံးရေမနေစဉ်, သငျသညျကြိုတင်ကာကွယ်မှုများနှင့်သင်တို့ရှိသမျှသည်ကုန်ကျစရိတ်မှာရေကိုရှောင်ရှားချင်ပါလိမ့်မယ်ဘယ်မှာအချို့ကို ယူ. ဖို့လိုအပ်ပါလိမ့်မယ်ဘယ်မှာအနည်းငယ်ရှိပါတယ်။ ယေဘုယျအားဖြင့်အနောက်ဥရောပအန္တရာယ်ကင်းကိုထိပုတ်ပါရေရှိပြီးအရှေ့ဥရောပကရှိသည်ဖို့အလားအလာနည်းပါသည်။ သငျသညျမသေချာသေးလျှင်, ရေကိုသောက်ရန်အန္တရာယ်ကင်းသို့မဟုတ်မပါလျှင်သင့်ရဲ့ဘော်ဒါဆောင်မှာဝန်ထမ်းအဖွဲ့ဝင်တစ်ဦးကိုမေးရမည့်အချိန်ယူပါ။
သငျသညျဘေးကင်းလုံခြုံသောက်ရေမရှိဘဲနိုင်ငံများတွင်မဆိုလာရောက်လည်ပတ်နေတဲ့အခါ, သငျသညျပုလင်းရေပေါ်မှာအားကိုးသင့်တယ်ဒါမှမဟုတ်သင်နိုငျပုံကိုကြည့်ယူနိုင်ပါသည် လမ်းပေါ်ပိုးရေသန့်ရှင်းစေ ။
သငျသညျအတွက်ကိုထိပုတ်ပါရေကိုမသောက်သင့်ပါတယ် အယ်လ်ဘေးနီးယား ။ အဲဒီအစား, ပုလင်း, ရေကိုဝယ်နှင့်သင့်သွားများနိန်နှင့်အတူချက်ပြုတ်ဘို့ကိုထိပုတ်ပါရေကိုအသုံးပြုပါ။
သငျသညျသြစတြီးယားအတွက်ကိုထိပုတ်ပါရေကိုသောက်နိုင်သည် - ကကမ္ဘာမှာအကောင်းဆုံးအချို့ကိုပဲ!
အဲဒီအစား, ပုလင်း, ရေကိုဝယ်, သင်၏သွားများနိန်နှင့်အတူချက်ပြုတ်ဘို့ကိုထိပုတ်ပါရေကိုအသုံးပြုပါ။
သင်ပိုမိုကျေးလက်ဒေသသွားရောက်လည်ပတ်ပါလိမ့်မယ်ဆိုလျှင်, အဲဒါကိုရှောင်ရှားရန်အကောင်းဆုံးပါပဲ။ ကိုယ့်ကိုသင်မသေချာသေးလျှင်သင်တည်းခိုနေလေရာရာ၌မှာဝန်ထမ်းကိုမေးပါ။
အဆိုပါကိုထိပုတ်ပါရေအတွက်သောက်ရန်အန္တရာယ်ကင်းဖြစ်ပါတယ် ခရိုအေးရှား ။
အဆိုပါကိုထိပုတ်ပါရေဂျီဘရောလ်အတွက်သောက်ရန်အန္တရာယ်ကင်းဖြစ်ပါတယ်, ဒါပေမယ့်ဒါကြောင့်အလွန်ကောင်းတဲ့အရသာမှမမျှော်လင့်ပါဘူး chlorinated ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ ဒါဟာနည်းနည်းရေကူးကန်ထဲကရေကိုသောက်နဲ့တူပဲ!
အဆိုပါကိုထိပုတ်ပါရေအေသင်အတွက်သောက်ရန်အန္တရာယ်ကင်းနှင့်ဂရိနိုင်ငံအတွက်အဓိကမြို့ကြီးများအများအပြားဖြစ်ပါတယ်။ အဲဒီမှာခဲလုံခြုံမယ့်အဖြစ်သျောကျွန်းများပေါ်၌သောက်သုံးရှောင်ကြဉ်ပါ။ သံသယရှိလျှင်, ဒေသခံတစ်ဦးကိုမေးပါ။
အဆိုပါကိုထိပုတ်ပါရေအတွက်သောက်ရန်အန္တရာယ်ကင်းဖြစ်ပါတယ် လီချင်စတိန်း ။
သငျသညျမွန်တီနီဂရိုးအတွက်ကိုထိပုတ်ပါရေကိုမသောက်သင့်ပါတယ်။ အဲဒီအစား, ပုလင်း, ရေကိုဝယ်, သင်၏သွားများနိန်နှင့်အတူချက်ပြုတ်ဘို့ကိုထိပုတ်ပါရေကိုသုံးပါ - ထိုသို့အဘို့အဿုံအဆင်ပြေပါသည်။
အဆိုပါကိုထိပုတ်ပါရေရိုမေးနီးယားအားလုံးကိုအဓိကမြို့ကြီးများအတွက်သောက်ရန်အန္တရာယ်ကင်းဖြစ်ပါတယ်။ မြို့အပြင်ဘက်ရှိ, သင်အနည်းငယ်ပိုပြီးသတိထားဖို့နှင့်ပုလင်းရေကပ်ချင်ပါလိမ့်မယ်။ သင်သောက်သို့မဟုတ်မနိုင်ရှိမရှိမသေချာသေးလျှင်သင့်ရဲ့ဘော်ဒါဆောင်ပိုင်ရှင်ကိုမေးပါ။
ယူကရိန်းဥရောပအဆိုးဆုံးရေရဲ့အရည်အသွေးရှိပါတယ်။ သငျသညျယူကရိန်းအတွက်ကိုထိပုတ်ပါရေကိုမသောက်သင့်ကြောင်း, သင်တို့သည်လည်းသင့်ရဲ့အံသွားနိန်ထိုသို့သုံးပြီးရှောင်ရှားသင့်ပါတယ်။
သငျသညျ 2018 ခုနှစ်တွင်ခရီးသွားတဲ့အခါမှာသင်ကနာမကျန်း Get မူမည်ကိုငါးနည်းလမ်းများ
တစ်အားလပ်ရက်အပေါ်နေစဉ်စျေးဝယ်5ငွေ-Saving သိကောင်းစရာများ
သင်ကအမေရိကန်အမျိုးသားပန်းခြံအတွင်းရှိမပွုနိုငျ 13 အရာ
ငါးမန်းထက် Deadlier ဖြစ်ကြောင်းခရီးသွားခြိမ်းခြောက်မှုများ
လန်ဒန်နှင့်ဂရိတ်ဗြိတိန်မှ Airfare အရောင်းအဝယ်ပြုလုပ်ရာတွင် Find လုပ်နည်း
6 မီးပြတိုက်အနီးလက်ပံ, မိန်းကြည့်ရှုပါရန်
Downtown Milwaukee မှ Mitchell ကအပြည်ပြည်ဆိုင်ရာလေဆိပ်ကနေ Get လုပ်နည်း
San Diego မှခန့်အကောင်းဆုံးပျော်ပွဲစားအစွန်းအကွက်
Ganesh ရုပ်ပုံများ: အိန္ဒိယနိုင်ငံရဲ့ Ganesh ပွဲတော် 31 ရင်သပ်ရှုမောဖွယ်ဓာတ်ပုံများ
Catalina ကျွန်းပေါ်သလားမှထိပ်တန်း 10 ဦးအရာ
ဥက္ကလာဟိုးမားစီးတီးက Black သောကြာနေ့ - ကျေးဇူးတုံ့ပြန် Specials ပြီးနောက်များအတွက်နာရီ
Pittsburgh ဗိသုကာပညာ - တစ်ဦးရဲ့ Virtual Tour
Spokies - Downtown ဥက္ကလာဟိုးမားစီးတီးစက်ဘီးငှားရမ်းခြင်းအစီအစဉ်